कुन ननलाईफमा कति दावी परेको छ ? भुक्तानी हुन बाँकी दावी कति ? – Insurance Khabar
कुन ननलाईफमा कति दावी परेको छ ? भुक्तानी हुन बाँकी दावी कति ?
प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ११:००
नेप्सेमा सुचिकृत निर्जीवन बीमा कम्पनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सम्ममा ९ अर्ब माथिको दावी परेको छ । आर्थिक वर्ष ७५/७६ को दोस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण अनुसार ३१ हजार ५ सय ५४को संख्यामा ९ अर्ब २८ करोड भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम देखिएको छ ।
१५ निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्य राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले भुक्तानी हुन बाँकी दावीको रकम र संख्या आफ्नो दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा उपलब्ध गराएको छैन ।
सबै भन्दा धेरै भुक्तानी हुनबाँकी दावी रकम हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको रहेको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ५० करोड बराबरको दावी भुक्तानी हुनबाँकी छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेपाल इन्स्योरेन्स पर्दछ । नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब १३ करोड बराबरको दावी भुक्तानी हुनबाँकी छ ।
सबै भन्दा थोरै दावी भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीमा प्रभु इन्स्योरेन्स परेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको १२ करोड २ लाख बराबरको दावी भुक्तानी हुन मात्र बाँकी छ ।
हेरौ निर्जीवन बीमा कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी दावीको अवस्था
कम्पनीको दावी भुक्तानी प्रक्रियामा रहने बित्तिकै कम्पनीले जम्मै भुक्तानी गर्छ भन्ने होइन । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पश्चात सो रकम थपघट हुन सक्छ र धेरै जस्तो अवस्थामा कम्पनीमा परेको दावी भुक्तानीको जम्मै रकम कम्पनीको दायित्व हुदैन किनकी उसले जोखिम न्यूनीकरणका लागि रिइन्स्योरेन्स पनि गरेको हुन्छ र दावी गर्दा रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि केही प्रतिशत रकम कम्पनी लाई प्रदान गर्छ ।